रातिको खाना खादा यस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाऊ! « Salleri Khabar
रातिको खाना खादा यस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाऊ!
रातमा खाएको खानाको आधारमा हाम्रो बिहानको स्वास्थ्यको अवस्था तय हुन्छ । त्यसैले हामीले राति खानपिनमा ध्यान पुर्‍याएमा हाम्रो बिहान अवस्य राम्रो बन्नेछ । समय बिराएर हामीहरु गलत किसिमका खानाहरु खाने गर्दछौं ।
धेरै समय लगाएर गलत खानाहरु खाने गरिन्छ भने खाना खाए लगत्तै सुत्न गर्दछौ । यस्तो नराम्रो बानिले गर्दा हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर हुने गर्दछ । खाएपछि पूरा दिन बोझिलो रुपमा बित्ने गर्छ । यसबाट शरीर बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
रातिको लागि तयार पारिएको जस्तो सुकै भोजनमा नुनको कदापि प्रयोग गर्नुहुँदैन । ताकी भोलिपल्ट उठ्दा शरीरमा कुनैपनि समस्या सिर्जना नहोस् । दिनभरीमा एक पटक मात्रै नुनिलो पदार्थ खाँदा शरीर स्वस्थ हुने गर्छ । हल्का भोजन गर्ने र रातको भोजन हल्का किसिमको र समयमा नै लिने गर्नुपर्छ ।
धेरै मात्रामा खाना खाने र ढिला खाना खाँदा शरीरले आफ्नो काम सुचारु गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा हर्माेनमा असन्तुलन हुने, तनाव, मोटोपना, जस्ता समस्याहरु सिर्जना हुने गर्छ । यसले मुटुको धड्कनमा समेत जोखिम बढाउने गर्छ ।
हामीले राति खाने भोजनमा यस्तो पदार्थ रोज्नुपर्छ कि जसले पाचनतन्त्रमा कुनै खराब प्रभाव नपारोस् । एक दिनमा कम्तिमा दुई पटक सलाद र एक पटक भएपनि फलफूलहरु खानुपर्ने हुन्छ । दैनिक खाना दुईपटक खानुपर्ने हुन्छ ।
रातमा सधैभरी कम क्यालोरीवाला खाना खानुपर्छ । यसको लागि भोजनमा किबी, ठूलो स्याउ, नासपाती, अनार, नरिवल, गोलभेंडा आदि रोज्नु राम्रो हुन्छ । यी मध्ये कुनै न कुनैलाई राति आफ्नो डाइटको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । राति धेरै मसलेदार र चिल्लो युक्त खाना खाँदा यसले ग्यास्ट्रिक वा कब्जियत हुने समस्या हुन्छ । रातमा सुत्नुभन्दा ४५ मिनेट अघि दूध पिउन सकिन्छ ।
असफलताले उनलाई कहिल्यै छोडेन । सधैं उनको अघि-पछि लागिरह्यो । तर, उनले असफलता कै कारण
कोरोना संक्रमणबाट महिलाभन्दा पुरुष बढी जोखिममा !
जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि चुनौतीहरुलाई स्वीकार गर्नुहोस् !
कसरी बालबालिकालाई मनोरोग लाग्नबाट बचाउने ? हेर्नुस डाक्टरका सुझाव
हामीले कुनै रचनात्मक काम गरेर समय बिताउन सक्छौँ ।